Shiinaha Intelligent Touchless Automatic xumbo saabuunta qaybiyaha iyo alaab | Zhaolong
Waxaan aqbalnaa amar yar, waxaad weydiin kartaa faahfaahinta iibiyahayaga.
Dhammaan alaabooyinkayagu waa 1 sano oo dammaanad ah.
Haddii wax keyd ah la heli karo, badeecadaha waxaa loo diri karaa 3 maalmood gudahood.
Haddii aysan oolin, alaabada waxaa la diri karaa qiyaastii 2-3 toddobaad.
OEM & ODM amar
Waxaan aqbalnaa amarka OEM, kaliya noo soo dir naqshadaada baakadkaaga, waxaan kaa caawin karnaa inaad sameysid Logo kuu gaar ah iyo xirxirida. Waxaan haynaa amarkeena R&D, ODM oo la aqbali karo sidoo kale.
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa shaybaarro baaris ah ka hor intaanan dalban amarka rasmiga ah.
Muunado ayaa loo diri karaa 1-5 maalmood gudahood iyadoo loo eegayo tirada muunada iyo heerka kaydkeena.
Waxaan ku bixin karnaa shixnad caalami ah (TNT, UPS, DHL iyo FedEx), hawada iyo badda.
Ku saabsan Qalabka Badeecada
Waxaan had iyo jeer ku dhagannahay inaan u isticmaalno walxo aamin ah oo leh darajo cunto ah, oo aan sun lahayn iyo phthalate lacag la'aan ah.
Ku saabsan Shahaadooyinka
Kaliya ma bixin karno bogga raadinta iyo lambarka taxanaha shahaadada, laakiin sidoo kale waxaan kaa caawin karnaa inaad sameyso xaqiijinta shahaadada.
Nidaamka Maareynta Tayada & QC
Waxaan leenahay IQC (Xakamaynta Tayada soo socota), PQC (Soosaarida Xakamaynta Tayada), IPQC (Xakamaynta Tayada Nidaamka Input), LQC (Xakamaynta Tayada Khadka) iyo FQC (Xakamaynta Tayada Ugu Danbeysa).
Waad ku raaxeysan kartaa adeegyadan:
1. Marka laga hadlayo alaabtayada, waxaan macaamiisha u soo bandhigi karnaa hal sano oo dammaanad ah.
2. Waxaan booqan laheyn si aan ula socono macmiilkeena si joogto ah si aan uga helno jawaab celin qiimo leh.
3. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid inta lagu jiro hawlgalka, waannu kaa caawin doonaa sidii aad u ogaan lahayd markii ugu horreysay.
Si dhakhso leh 2.5s shidma infrared
Nadiifi xumbo cufan
Si ka fudud bamgareynta
Jeermiga ka fogee
ILAA 2 BILOOD EE ISTICMAAL (oo leh 220ml / 7.5oz awood weyn)
Hore: Carruurta guryaha wax lagu karsado ee indhashareerka saabuunta lagu nadiifiyo
Xiga: Miis taagan xumbo gacanta taabasho la'aan saaraha saabuunta xumbo dareere ah
Shaxda taagan xumbo gacanta taabto li li automatic ...